ठगीको नयाँ तरिका,फेसबुक, भाइबर चलाउनुहुन्छ ? सावधान ! - Recent Nepal News
प्रकाशित मिति: मंगलबार, कार्तिक २६, २०७६ समय: २०:४४:२९
काठमाडौं। सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगसँगै नयाँ तरिकाबाट साइबर अपराध हुने गरेको छ ।
“विदेशबाट सामान आयात गरेर इमेलमार्फत रकम भुक्तानी गर्दा, ट्रेकिङ, ट्राभल्स, टुर्स कम्पनीको बढी ‘इमेल फिसिङ’ हुने गरेको छ”, उनले भने।
महाशाखाले समेत अहिले साइबर अपराधका घटनाको अनुसन्धानका लागि ब्यूरोमा पठाउन थालेको छ । प्रहरीले लागू गरेको ‘समुदाय–प्रहरी साझेदारी’ कार्यक्रमले साइबर अपराधसमेत रोकथाम हुनेमा प्रहरी विश्वस्त छन्। रासस